बुध कन्यामा प्रवेश : कुन राशीलाई के हानी नोक्सानी गर्छ, यस्तो सावधानी अपनाउर्नेछ
काठमाडौं । बुधबार बिहान ५ बजेर १५ मिनेटमा बुध ग्रहले आफ्नाे उच्च राशि कन्यामा प्रवेश गरेका छन् ।
कन्या राशिमा बुध स्वराशीका साथै उच्च पनि हुन्छन्।। बुधलाई ज्याेतिषशास्त्रमा राजकुमारकाे पदवी दिईएकाे छ ।
याे परिवर्तनले के फरक पर्छ त राशिहरुमा ?
१. मेष मेष।राशिका जातकलाई बुधकाे गाेचर अनुसार धर्मशास्त्रमा रुचि बढनेछ । आर्थिक लाभ हुनेछ । शत्रुहरुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ । मानसिक सुख पाईनेछ । सामाजिक प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ । उत्ताउलाे व्यवहार नगर्नुस, खानपीनमा सजक रहनुहाेला । कुनै बृद्धालाई मनग्ये सहयाेग गर्नुस ।
२.वृष वृष राशिका जातकलाई बुध गाेचर अनुसार मानसिक तनावले कष्ट हुने देखिन्छ । काममा असफलता हुने सम्भावना छ । जीवनसाथी र सन्तानसँग विवाद हुनेछ । आर्थिक हानी हुनुका साथै प्रेम सम्बन्धमा पनि केही समस्या देखिनेछ । प्रातकाल छिटाे उठेर लामाे श्वास लिनुस। पितृका नाममा दान गर्नु।राम्राे हुनेछ । ३. मिथुन मिथुन राशिवाला जातकलाई बुध गाेचर अनुसमर मातापिताकाे सुख पाईने छ । धन लाभ हाेला । वाहन सुखका साथै सम्पत्ति लाभ हुने याेग छ । पारिवारिक सुखका साथै बाहिर पनि सहयाेग पाईनेछ । बालबालिकालाई केही मीठाे कुरा खुवाउनुस ।
४. कर्क कर्क राशिवाला जातकलाई बुधकाे स्थान परिव,्तनले साहस पराक्रममा कमि जस्ताे लाग्नेछ । धन हानी हुनुका साथै अाफन्तसँग विवाद हुने देखिन्छ । मन अशान्त हुने देखिन्छ । ध्यान गर्ने बानी बसाल्नुस । समय परिवर्तन हुन्छ, धैर्य गर्नुस ।
५. सिंह सिंह राशिका जातकलाई धन फाभ हुने देखिन्छ । वाणीमा अाधारित काममा विशेष लाभ हाेला । विद्ध्यामा सफलता छ । अाफन्तबाट लाभ हाेला । गाईलाई केही खुवाउनुस र घरमा समय दिनुस ।
६. कन्या कन्या राशिफाई धनहानीकाे याेग छ । कटु शब्दका कारण विवाद हुन सक्नेछ । नातेदारलाई हानी पुग्न सक्ला । बन्धनकाे भयका साथै मानसिक कष्ट हुने छ । बाेलीमा नियन्त्रण अावश्यक छ । गलतफसंगत र भाेजनबाट टाढा रहनुस । १३ दिनसम्म सात्विक भाेजन मात्र ग्रहण गरे लाभ मिल्नेछ ।
याे पनि पढ्नुस आज - २१ भाद्र २०७६ शनिवारको राशिफल
बुध गाेचर।अनुसार मनमा नानाथरि कुरा खेलेर।अशान्त हुनसक्छ । नचाहेर पनि धन हानी हुने।र।सुखमा कमी देखिन्छ । शुत्रु सक्रिय रहलान । विवाद हुन सक्छ । म मात्रै सहि हाे भन्ने भावनाले साथिभाईसँग दुरिफबढन सक्छ । प्रातःकाल मन्दिर गएर दान गर्नुस । परिवारमा कसैकाे स्वास्थका कारण चिन्ता हाेला । दान गर्नुस ।
८. वृश्चिक राम्राे समय छ । तर न मात्तिनुहाेला । शुभ कार्यमा रुचि बढने छ । परिवारमा सुख र प्रेमका लागि राम्राे छ । स्वास्थ राम्राे छ । सन्तान सुख पाईने याेग छ । पुरुष जातकलाई स्त्रि सुख देखिन्छ । शिक्षामा केही दान दातव्य गरे उत्तम रहने छ ।
धनु राशिका जातकलाई बुध गाेचर अनुसार नयाँ पद पाईने देखिन्छ । शत्रुहरुमा विजय पाईनेछ । व्यवसायमा फाभ हुने छ । काममा सफलचा छ । सन्तान पक्षकाे काम बन्ने देखिन्छ । कुनै पुराना साथी भेट हुन सक्छन् । पितृदान गर्नु वेश हाेला । सामाजिक काममा समय बढी खर्च गर्नुहाेला ।
मकर राशिका वातकलाई केही समस्या देखिन्छ । काममा विघ्नवाधा अाउने । यात्रामा कष्ट देखिनेछ । सम्बन्धिहरुसँग विवाख बढन सक्छ । हाेशियार रहनुहाेला । तपाईकाे राम्राे समय अाउँदैछ, धैर्य गर्नुहाेला । स्त्रि जातिसँग मित्रतापुर्ण व्यवहार गर्नुहाेला । ११. कुम्भ:
बुध गाेचर अनुसमर धन लाभ हुन सक्छ । शत्रु परास्त हुनेछन् । मन प्रसन्न रहला । प्रतियाेगि परिक्षामा सफलताकाे याेग छ । सामुहिक काममा समय व्यतित गर्नुहाेला । मनमा धेरै समयदेखि राेकिएकाे काम शुरु गर्ने राम्राे समय छ ।
१२. मीन समय मध्यम छ । काममा सफलता पाईएला । मनमा भने नानाथरिकाे चिन्ता हुन सक्छ । सन्तान पक्षका बारेमा बढी चिन्ता नलिनु वेश हुनेछ । धार्मिक र सामाजिक काममा मन लगाउनुहाेला । अाकस्मिक धन लाभ हुन सक्छ । यात्रामा सावधानी अावश्यक देखिन्छ ।